Archive du 20161223
Voahangy Rajaonarimampianina Tsy tamana eto Madagasikara intsony
Mivoaka ny vaovao ankehitriny fa efa tsy mahatombina eto Madagasikara intsony ny vadin�ny filoham-pirenena, ka aleony mandeha sy mivoaka matetika any ivelany nanomboka ny volana jolay teo.
Ratsy fiafara ny olon�ny HAT Minisitra 5 no efa maty, misy ny migadra
Tsy hay hazavaina ny toe-javatra nahazo ireo olona nitondra tamin�ny andron�ny tetezamita fa tsikaritra ho ratsy fiafara raha samy mpitondra teto amin�ny firenena ny ankamaroany.
Fanambaram-pananana Malaina ny mpitondra, misy afenina angaha ?
26 amin�ireo minisitra 32 ihany hatreto no efa nanao fanambaram-pananana, raha ny vaovao azo avy eo anivon�ny Birao mahaleotena miady amin�ny kolikoly na ny Bianco.
Antoko Arema Hanomana ny hoaviny
Antoko velona ary tsy azo tsinontsinoavina eto amin�ny firenena ny AREMA matoa nahatratra ny tsingerintaona faha-40 niorenany.
Manaova fety sambatra fa�!
Mba manao ahoana ny anareo ao ry Jean ny fanomanana ny fety a ? Mba notazaninay teny amin�ny falehan�ny besinimaro mantsy ianareo mianakavy fa tsy hita e !
Mpivarotra tsy ara-dal�na Hakarina fitsarana izay tratra
Hitohy ny fanalana mpivarotra tsy manara-dal�na eto Antananarivo Renivohitra, saingy hiova paikady ny kaominina.
Kaominina Alasora Olona sahirana 2.000 notolorana fanomezana
Kaominina iray anisan�ny mijery akaiky ny maha olona ny kaominina Alasora tantanan�ny Ben�ny tan�na Marc Ramiarinjatovo.
Kaoperativa Mirindra 163-194 Miha matihanina
Miroso eo amin�ny sehatry ny maha matihanina hatrany ny kaoperativa Mirindra amin�ny asa fitateram-bahoaka sahaniny eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Mpamatsy vola Te hiara-kiasa amin�ny firenena mandroso, hoy i Paul Rabary
Anisan�ny manana anjara amin�ilay famatsiam-bola 6 miliara dolara avy any amin�ny mpamatsy vola isika, hoy ny minisitry ny fanabeazana fototra, Paul Rabary.
Vaovao tokoa ve ?
Mampivarahontsana no sady mahakivy ny mahita fa efa hifarana ity ny taona kanefa dia miha midaraboka hatrany amin�ny lafiny rehetra ny raharaham-pirenena eto amintsika. Nanomboka tany amin�ny volana janoary no efa nandeha ny fitatatatana isan-karazany fa hanjakan�ny kolikoly ny firenena